स्विजरल्याण्डलाइ मात खुवाउने ठाउँ छ नेपालमै, तर कसैको आँखा पर्न सकेन यस्तो स्वर्गजस्तै ठाउँमा ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > स्विजरल्याण्डलाइ मात खुवाउने ठाउँ छ नेपालमै, तर कसैको आँखा पर्न सकेन यस्तो स्वर्गजस्तै ठाउँमा !
रामेछाप र दोलखाको संगमलस्थल सैलुङ प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य हो । समुन्द्री सतहबाट ३१४८ फिट उचाइमा रहेको शैलुङ्ग राजधानी काठमाडौंबाट १४१ किलोमिटर दुरीमा रहेको छ । शैलुङ्गको आकर्षण प्राकृतिक दृष्यावलोकन र धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो । शैलुङ्ग हिन्दु र बौद्ध धर्मालम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र पनि हो । शैलुङ्गबाट आफैमा प्राकृतिक जैविक विविधताले भरिपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यकीयस्थलको रुपमा रहेको छ ।
शैलुङ्गको आफ्नै मौलिकता छ । प्राकृतिक रुपमा धनी शैलुङ्गको आकर्षण बनेको छ, धार्मिक पर्यटन । शैलुङ्गको विकास गर्न र नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा परिचित छ ।शैलुङ्गको अवलोकन भ्रमणको लागि आउने÷जाने पर्यटकहरुको लागि मुडे, चरिकोट, तामाकोसी, देवीटार मिल्ती, मन्थली सित्खा नेपालकोथक चारैतिरबाट सडक सञ्जालले जोडिएको छ । दोलखा र रामेछापको दुवै क्षेत्रबाट शैलुङ्ग पुग्न सकिन्छ । शैलुङ्गको खोलाखर्क र दोलखाको ढुंगेमा बास बसेर पनि बिहानको सूर्योदय हेर्न सकिन्छ ।
आदिवासी जनजाति पर्यटन पदमार्ग सिन्धुपाल्चोकको मुडे हुँदै दोलखाको मागादेउराली, ढुंगे हुँदै शैलुङ्ग खोलाखर्क, पर्यटन गन्तव्य गाउँ दोरम्बा हुँदै नेपालथोकसम्म ७ दिनको पदयात्रा सञ्चालन भइसकेको छ । जुन पदयात्रा विदेशी पर्यटकहरुको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । शैलुङ्ग जानको लागि मुख्यगरी तीन वटा नाकाहरु प्रमुख रुपमा रहेका छन् । राजधानी काठमाडौंबाट बिपी राजमार्गको नेपालकोक, सित्खा सुनकोसीको नदी पार गर्दै धार्मिकस्थल खाँडादेवी मन्दिर अग्लेश्वर महादेव पर्यटन गन्तव्य गाउँ दोरम्बा हुँदै शैलुङ्ग । दोस्रो उत्तरी क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकको मुडे मागादेउराली हुँदै ढुंगे बजारबाट शैलुङ्ग र तेस्रो सालुखुम्बु, जिरीबाट आउने पर्यटकहरु मन्थली, भैसे, गोठपानी हुँदै शैलुङ्ग पुग्न सक्छन् ।
सिमी बिक्री गर्न तयार गर्दै शिक्षिका : स्याङ्जा, कालिगण्डकी गाउँपालिका ६ दब्छेस्थित धुब ज्योति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले करेसाबारीमा फलाएको सिमी बिक्री गर्न तयार गर्दै शिक्षिका । विद्यार्थीहरुले लगाएको तरकारीको बिक्रीबाट आएको रकम पुस्तकालयको लागि खर्च गर्ने गरिएको छ । तस्वीर ः हिमलाल पराजुली
मन्मा आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ का ५ जना : डोल्पा ठुलिभेरी नगरपालिका–२ कुम्लीस्थित मन्मा आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ का ५ जना विद्यार्थीहरु पढ्दै । तस्वीर ः हेमन्त केसी
कृषकलाई मौरीघार वितरण : पाल्पा रामपुर नगरपालिका वडा नं १ का २० जना कृषकलाई अनुदानमा गोलासहितको आधुनिक मौरीघार वितरण गरिएको छ । वडा कार्यालयको ५० प्रतिशत अनुदानमा एक÷एक वटा गोलासहितको मौरीघार वितरण गरेको हो । वडा कार्यालयले बाँकी ३६ जना कृषकलाई यही महिना भित्र मौरीघार वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । तस्वीर ः सुशीला रेग्मी
पर्यटकीय क्षेत्र शैलुङ्गको थप विकासको लागि गाउँपालिकाले सय थुम्काको वरिपरि चक्रीय सडक निमार्ण गर्न ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरेको छ पर्यटकीय क्षेत्र शैलुङ्गको थप विकासको लागि गाउँपालिकाले सय थुम्काको वरिपरि चक्रीय सडक निमार्ण गर्न ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनमा बृद्धि गर्ने उद्देश्यले सडक निमार्ण गर्न लागेको हो । तस्वीर ः दीपशङ्कर चौलागाई
मलेसियाबाट आयो एक नेपालीको अत्यन्तै दु*खद घट*नाको खबर ,आफन्त संग सम्पर्क बिहिन ! सेवा नै धर्म हो सक्दो सेयर गरौं !!
अभिनेत्री वर्षा राउत र अभिनेता संजोग कोइरालाको आज यसरी भयो बिवाह…पुरा हेर्नुहोस
नेकपाकाे चियापानः सबैकाे अाँखाका हिरो बने विप्लव र सिके राउत